Fanamafisana ny famoahana gazety
Tags: dittoeprtsenaprfizarana prvalandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazetyfizarana gazetyfanoratana an-gazetymanindryprweb
Ka ny zavatra lazainao dia tokony hampiasa dika SEO midina amin'ny famoahana gazety isika?
Tena, Bob. Ny fivarotana PR sasany dia tsy manome fahafahana hampiasa HTML, na izany aza. Vokatr'izany dia afaka manampy ny fampiasana teny fanalahidy mifanakaiky sy fizarana tsara.
Ankasitraho ny filazana PRWeb ao amin'ny lahatsoratrao Doug 🙂
Ao amin'ny PRWeb.com dia manana loharano fianarana maro izahay mba hanatsarana ny famoahana an-gazety ho an'ny milina fikarohana, ireto misy toro-hevitra 5 haingana hanombohana. Marina ny hevitrao eto ambany, satria ny fampiasana teny fanalahidy sy fizarana tsara dia azo antoka fa manampy SEO.
Raha manana fanontaniana hafa momba ny SEO ho an'ny famoahana an-gazety ianao dia azonao atao ny mibitsika anay @prweb 🙂
Misaotra tamin'ny nanonona PressKing ihany koa!
Ny fandefasana famoahana gazety dia mety hisy fiantraikany tsara amin'ny SEO, tokoa. Izay no antony hanomezanay fitaovana fandrefesana SEO (miaraka amin'ny famoahana an-gazety sy ny maody fanaraha-maso ny media) – mahafinaritra foana ny manara-maso ny hetsika an-tserasera, sa tsy izany?
Manana endri-javatra fanampiny vitsivitsy izay hasehonay amin'ny herinandro ho avy izahay - Hataoko vaovao foana ianao!
Ny fizarana famoahana gazety dia singa manan-danja amin'ny fananganana rohy SEO. Zava-dehibe ny mampiditra lahatsoratra vatofantsika sy rohy ao amin'ny vatan'ny famoahana. Na izany aza, tokony hotadidinao fa ny famoahana an-gazety dia tokony ho mendrika ny vaovao. Aza mandany fotoana sy vola amin'ny famoahana an-gazety izay tsy horaharahaina.
Tsy afaka nanaiky bebe kokoa, Nick. Indraindray ny orinasa dia manambany ny
11 Oktobra 2011 à 10:42
Nasaina nanao fanambarana an-gazety ho an'ny orinasanay aho ary te-hahafantatra ny fomba hisorohana ny fahavoazana noho ny fananana votoaty dika mitovy? Tamin'ny fangatahako fanintelony ho an'ny fandefasana iray dia tsapako fa raha toa ka mametraka ny lahatsoratro ny tsirairay amin'ireo tranonkala ireo, dia mety ho hitan'ny milina fikarohana ho votoaty dika mitovy izany ary handevina ny vokatray vaovao. Inona no tetika tsara harahina?
Raha mandinika tsara ny 'atiny dika mitovy' ianao, dia angano kely fa mety ho voasazy ianao amin'izany. Raha ny marina dia tsy misy izany hoe sazy votoaty dika mitovy. Jereo ny bilaogy Google ofisialy:
Tsy misy fiatraikany ratsy ny fanaovana duplikat votoaty, fa mety mandà ny fiantraikany tsara. Nahoana? Satria ny olona dia mety hiverina amin'ny votoaty na aiza na aiza nametrahana azy. Tianao havoaka amin'ny URL tokana ny atiny mba hampifandraisana ny olona amin'io URL tokana io. Rehefa mifandray amin'io URL tokana io izy ireo dia manana laharana tsara kokoa ianao. Rehefa mifandray amin'ny pejy hafa izy ireo, dia tsy hiakatra araka izay tratra ny pejinao.
Ny fanaparitahana famoahan-gazety dia tsy fikasana fanahy iniana hamitaka ny motera fikarohana… fomba fanao efa voazaha toetra sy marina izany amin'ny fizarana vaovao, na amin'ny fomba mahazatra na amin'ny Internet.